Linkardipa - Page 746 of 759 - Entertainment Website
[ June 29, 2022 ] မန်တလေး စကျသုံးဆီပနျ့ အရောငျးဆိုငျမြား ရောငျးစရာ ဆီမရှိသဖွငျ့ ပိတျပဈရမညျ့ အခွဆေိုကျနေ…	ဲူဲူကြားသ်ိသမျှ
[ June 29, 2022 ] မွို့ပွမှာ ပှဲကဖို့ ဆိုငျးသံလေး ပေးလိုကျကွရအောငျ လို့ ဆိုလိုကျတဲ့ ပနျဆယျလို	ဲူဲူကြားသ်ိသမျှ
အချိန်တန်ရင် ခေါ်အိပ် . ပြီးရင် ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ တစ်ချို့ မိန်းခလေးတွေဆို ဂျုံးဂျုံးကျနေပါပြီ
November 19, 2020 Linkardipa Comments Off on အချိန်တန်ရင် ခေါ်အိပ် . ပြီးရင် ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ တစ်ချို့ မိန်းခလေးတွေဆို ဂျုံးဂျုံးကျနေပါပြီ
အချိန်တန်ရင် ခေါ်အိပ် . ပြီးရင် ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ တစ်ချို့ မိန်းခလေးတွေဆို ဂျုံးဂျုံးကျနေပါပြီ အချိန်တန်ရင် ခေါ်အိပ်လိုက် ပြီးရင် ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ တချို့ မိန်းခလေးတွေဆို လက်ဆုပ် လက်ကိုင် ပြစရာ ယောက်ျားသာ မရှိတာ အိမ်ထောင်သည်ချစ်သူ ရည်းစားတွေ တွဲလာတာ ကြာလာတဲ့ အပြင် တယောက် အကြောင်း တယောက် သိပြီး( Living Together ) လင်မယားလို ဖြစ်နေရင်တော့ လက်ထပ်လိုက် ကြတာ […]
ကြွက်မစင်ကနေ ကူးစက်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်တမျိုး လူကိုလည်း ကူးစက်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိ
November 19, 2020 Linkardipa Comments Off on ကြွက်မစင်ကနေ ကူးစက်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်တမျိုး လူကိုလည်း ကူးစက်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိ
ကြွက်မစင်ကနေ ကူးစက်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်တမျိုး လူကိုလည်း ကူးစက်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိ ဘိုလီဗီးယားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အော့အန်ခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်းအစရှိတာတွေကို ဖြစ်ပွားစေတဲ့ ရှားပါးဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လူတစ်ဦးကနေ တစ်ဦးကို ကူးစက်စေနိုင်တယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူညီပြီး ကူးစက်ခံရသူ ငါးဦးမှာ သုံးဦးအထိ သေဆုံးစေနိုင်တဲ့အထိ ဆိုးကျိုးဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကြွက်ကတဆင့်ကူးစက်တဲ့ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ဘိုလီဗီးယားမြို့တော် လာပါ့ဇ်ရဲ့ အရှေ့ဘက် မိုင် ၃၇၀ အကွာက […]
အကြံပိုင်ချက် . . ကရိန်းကားနဲ့ကို လာခိုးတဲ့ သူခိုး
November 19, 2020 Linkardipa Comments Off on အကြံပိုင်ချက် . . ကရိန်းကားနဲ့ကို လာခိုးတဲ့ သူခိုး
အကြံပိုင်ချက် . . ကရိန်းကားနဲ့ကို လာခိုးတဲ့ သူခိုး ကော့မှူးမြို့နယ်၌ 315 KVA ထရန်စဖော်မာ ခိုးယူသူများအား အရေးယူ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့မှူးမြို့နယ်တွင် နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က 315 KVA ထရန်စဖော်မာ ခိုးယူသူများအား အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်နေ ဦးသူရရဲစိုး(၂၅)နှစ် Supervisor (Crystal Diamond ကုမ္မဏီ)သည် နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ […]
ဆီရောင်းနေတဲ့ အဘကို ဘာလို့ ငိုနေတာလဲမေးကြည့်လိုက်သောအခါ
November 19, 2020 Linkardipa Comments Off on ဆီရောင်းနေတဲ့ အဘကို ဘာလို့ ငိုနေတာလဲမေးကြည့်လိုက်သောအခါ
ဆီရောင်းနေတဲ့ အဘကို ဘာလို့ ငိုနေတာလဲမေးကြည့်လိုက်သောအခါ ဆီရောင်းနေတဲ့ အဘ ဘာကြောင့် ငိုနေတာလဲ မေးကြည့်လိုက်သောအခါ….. အနီးရှေ့မှာ စက်ဘီးလေးတစ်စီးနဲ့ ဓာတ်ဆီရောင်းနေတဲ့ အဘိုးအိုဟာ အသက်ရ၀ကျော်နေပြီ သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိပေမဲ့ သမီးလေးက ဦးနှောက်လေးက စိတ်သိပ်ပုံမှန်မဟုက်တော့ အလုပ်လုပ်စားလို့မရတော့ အဲ့အဘကပဲ ဓာတ်ဆီလေးရောင်းရင်းနဲ့ဘဝကိုရပ်တည်နေတယ်….။ ကျုပ်အမြဲကြုံတိုင်းအဲ့အဘ ဆီမှာပဲထည့်ဖြစ်တာ နှစ်အတော်ကြာပြီ ဟိုးးနှစ်တွေကတော့ အဲ့အနီးမှာ Donko ဆီဆိုင်ကြီးမရှိတော့အဲ့အဘရောင်းကောင်းလောက်ပါတယ် ခုတော့ အဲ့နားတစ်ဝိုက်မလှမ်းမကမ်းလေးမှာဆီဆိုင်ကြီးရှိတော့ လူတွေကသိပ်မထည့်ကြတော့ဘူး ဆီဆိုင်ကြီးတွေကပိုရတယ်ဆိုပြီး ဆိုင်ကြီးတွေမှာထည့်ကြတာပဲများတယ်။ […]
ဒီနေ့ ပိုးတွေ့လူနာတွေပို့ရတဲ့အထဲ ရင်ထဲအထိဆုံး မြင်ကွင်းလေးပါဘဲ
November 18, 2020 Linkardipa Comments Off on ဒီနေ့ ပိုးတွေ့လူနာတွေပို့ရတဲ့အထဲ ရင်ထဲအထိဆုံး မြင်ကွင်းလေးပါဘဲ
ဒီနေ့ ပိုးတွေ့လူနာတွေပို့ရတဲ့အထဲ ရင်ထဲအထိဆုံး မြင်ကွင်းလေးပါဘဲ ၃နှစ်သမီးလေး ပိုးတွေ့လို့ လွှဲပြောင်းဆေးရုံကိုပို့တော့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေး ကားပေါ်တက်လိုက်လာတာလေးမြင်ရတော့ ကိုယ်တွေရင်ထဲမကောင်းချက်😔😔 မိဘတွေနဲ့ တကွဲစီသွားနေရမယ်ဆိုတော့ နောက်ကနေလိုက်ပို့ပေးတဲ့အမေရဲ့ အားပေးသံ ဆေးရုံရောက်ရင်မေမေ့ကို VC ခေါ်နော်သမီးလေးတဲ့😔 တည်ငြိမ်တဲ့သမီးငယ်လေး ကိုယ့်အထုတ်လေးကိုယ်ဆွဲပီးခေါင်းလေးငြိမ့်ပြပြီး ကားပေါ်တက်လိုက်ခဲ့ရှာတယ်😢😢 Fighting သမီးလေးရေ ဦးတို့အားပေးနေတယ်။ အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းပါစေကွယ်😭😭😭 Credit to Arlar Waka Unicode ဒီနေ့ ပိုးတှလေူ့နာတှပေို့ရတဲ့အထဲ ရငျထဲအထိဆုံး မွငျကှငျးလေးပါဘဲ […]
November 18, 2020 Linkardipa Comments Off on လာဘ်ပွင့်ငွေဝင်ဆား၂ဆုပ်အစီရင်
လာဘ်ပွင့်ငွေဝင်ဆား၂ဆုပ်အစီရင် လာဘ်ပွင့်ငွေဝင်ဆား၂ဆုပ်အစီရင်စိတ်မကြည်ဘူးမလန်းဆန်းဘူးစိတ်တွေထိုင်းမှိုင်းနေတယ်ဘာလုပ်လုပ်အဆင်ပြေမနေဘူးအနှောင့်အယှက်အဟန့်အတားတွေလည်းများနေတယ်။ လာဘ်ပိတ်နေတယ်။အရောင်းအဝယ်လည်းမဖြစ်ဘူး။ယုတ်စွအဆုံး ဘုန်းကံနိမ့်နေတယ်လို့စိတ်ကခံစားရရင်သေချာတယ်သင့်မှာအံ့မိတာအညှိတင်နေတာအပအညံ့အခိုက်တွေများနေတာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေ တွေ့ကြုံခံစားနေခဲ့ရင်အစစအရာရာအဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး ထိရောက်တဲ့ဂမ္ဘီရအစီရင်လေးတခုဒါနပြုပါ့မယ်။ မိမိလက်၂ဖက်ညာလက်မှာဆားတဆုပ်ဘယ်လက်မှာဆားတဆုပ် ဆုပ်ကိုင်ထားပြီးသက်သောင့်သက်သာစွာ ထိုင်ပါပြီးလျှင်မိမိစိတ်ထဲက လေးနက်စွာ အာရုံပြုဆန္ဒပြုရမှာကမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာ အညှိတင်နေတဲ့ အံ့မိတာတွေမကောင်းတဲ့အပ အညံ့ အခိုက်တွေကိုလက်ထဲမှာဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ဆားတွေကစုပ်ယူနေတယ်ဆိုပြီး အာရုံပြုနေရပါ့မယ်။ ၅မိနစ်လောက် ဆုပ်ကိုင် အာရုံပြုပြီးရင်တော့လက်ထဲဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ဆားတွေကို အဆင်ပြေရာစွန့်ပစ်ပြီးလက်ကို သေချာသန့်စင်အောင်ဆေးကြောရပါ့မယ်။၃ရက်ခြား ၁ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးပါ။ ၃ကြိမ်မြောက် ပြုလုပ်ပြီးရင်ကို သိသိသာသာအစစအရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့လာတာတွေ့ကြုံခံစားလာပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ ဆရာကိုမင်းနိင်နှင့်တကွသင်ဆရာ မြင်ဆရာကြားဆရာများအား အစဉ်ရှိခိုးဦးခိုက်လျက်ဆရာဟိန်း B.A (Psy:)(ဗေဒင်နှင့် ဂမ္ဘီရယတြာအစီရင်ပညာ […]
မဲရလဒ်တွေကို လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့နဲ့ စစ်ဖို့ USDP တောင်းဆို
November 18, 2020 Linkardipa Comments Off on မဲရလဒ်တွေကို လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့နဲ့ စစ်ဖို့ USDP တောင်းဆို
မဲရလဒ်တွေကို လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့နဲ့ စစ်ဖို့ USDP တောင်းဆို ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲစာရင်းဖောင်းပွမှုတွေဖြစ်ပြီး မဲမသမာမှုတွေ ရှိခဲ့တာကြောင့်၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ အဖွဲ့ ဖွဲ့ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့၊ မန္တလေးတိုင်း ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကော်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌ ဦးရှိန်ဝင်းကတော့ မဲစာရင်းတွေကို ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်ခင်ကတည်းက နှစ်ကြိမ်တိတိ ကပ်ခဲ့တာကြောင့်၊ အခုချိန်မှာ ဘာတစ်ခုမှ ပြန်စစ်ဆေးပေးစရာ မလိုဘူးလို့ တုံ့ပြန်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေအပေါ် […]
အသား လှုပ်နိမိတ် အဟောများ
November 18, 2020 Linkardipa Comments Off on အသား လှုပ်နိမိတ် အဟောများ
အသား လှုပ်နိမိတ် အဟောများ ၁။ ဦးခေါင်းအရှေ့ပိုင်း ။ မျှော်လင့်ထားသော ကြံစည်ထားသော ကိစ္စရပ်များ အောင်မြင်ပြီး မြောက်စေခြင်း ၂။ နောက်ပိုင်း ။ ။ ကောင်းသာခရီး ပျော်ရွှင်စရာခရီး သွားလာရခြင်း ၃။ နဖူးပြင်အလယ် ။ ။ ငွေကုန်ကြေး ကျများခြင်း ရင်းနှီးမတည်ငွေဆုံးရှုံး ရခြင်း ၄။ လင်္ကျာနဖူး ။ ။ ရုတ်တရက်ခရီးထွက်ရခြင်း ၅။ လက်ဝဲနဖူး ။ ။ […]
လာမယ့် အိမ်ပြင်မထွက်ရ (၂) ပတ်ကာလအတွင်းမှာ စည်းကမ်းဖောက်သူတွေကို သေချာ အရေးယူမည်
November 18, 2020 Linkardipa Comments Off on လာမယ့် အိမ်ပြင်မထွက်ရ (၂) ပတ်ကာလအတွင်းမှာ စည်းကမ်းဖောက်သူတွေကို သေချာ အရေးယူမည်
လာမယ့် အိမ်ပြင်မထွက်ရ (၂) ပတ်ကာလအတွင်းမှာ စည်းကမ်းဖောက်သူတွေကို သေချာ အရေးယူမည် လာမယ့် အိမ်ပြင်မထွက်ရ (၂) ပတ်ကာလအတွင်းမှာ စည်းကမ်းဖောက်သူတွေကို သေချာ အရေးယူမည် ရွေးကောက်ပွဲကာလနောက်ပိုင်းမှာ လူစုလူဝေးတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့် ကိုဗစ် ကူးစက်နှုန်း မြင့်တက်လာတဲ့အတွက် အရေးယူတဲ့အပိုင်းကို ပိုတင်းကြပ်လာနိုင်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ဗဟိုကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးက ပြောပါတယ်။ “အခုတင်ပြထားတဲ့ Stay at Home နှစ်ပါတ်ဆိုတာဟာ အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘဲ […]
နိုဝင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်မှစတင်ကာ တန်ခိုးကြီးဘုရား ပုထိုးစေတီများကို လူဦးရေ ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ပြန်လည် ဖူးမျှော်ခွင့်ပြုမည်
November 18, 2020 Linkardipa Comments Off on နိုဝင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်မှစတင်ကာ တန်ခိုးကြီးဘုရား ပုထိုးစေတီများကို လူဦးရေ ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ပြန်လည် ဖူးမျှော်ခွင့်ပြုမည်
နိုဝင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်မှစတင်ကာ တန်ခိုးကြီးဘုရား ပုထိုးစေတီများကို လူဦးရေ ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ပြန်လည် ဖူးမျှော်ခွင့်ပြုမည် ယခု နိုဝင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်မှစတင်ကာ တန်ခိုးကြီးဘုရား ပုထိုးစေတီများကို လူဦးရေ ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ပြန်လည် ဖူးမျှော်ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှသိရပါတယ်။ အစည်းအဝေးတွင် Stay at Home သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိသော တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များမှ တန်ခိုးကြီးဘုရား၊ […]
« 1 … 745 746 747 … 759 »